November 13, 2017 Posted by RojgaarBazar
‘मिस टुरिज्म’ को ताज आरतीलाई ‘मिस टुरिज्म’ को ताज आरतीलाई ‘मिस टुरिज्म’ को ताज आरतीलाई ‘मिस टुरिज्म’ को ताज आरतीलाई‘मिस टुरिज्म’ को ताज आरतीलाई‘मिस टुरिज्म’ को ताज आरतीलाई‘मिस टुरिज्म’ को ताज आरतीलाई बाँकी
Nagma Shrestha to represent Nepal at Miss Universe 2017 Nagma Shrestha to represent Nepal at Miss Universe 2017Nagma Shrestha to represent Nepal at Miss Universe 2017 बाँकी
November 07, 2017 Posted by RojgaarBazar
एक हूल पुुरुष मोडल कम्मरमाथि चाहिँ कोट मात्रै लगाएर र्‍याम्पमा देखा परे । दर्शकलाई यो दृश्य कौतूहलपूर्ण लागेको उनीहरूको हाउभाउबाट बुझिन्थ्यो । एक हूल पुुरुष मोडल कम्मरमाथि चाहिँ कोट मात्रै लगाएर र्‍याम्पमा देखा परे । दर्शकलाई यो दृश्य कौतूहलपूर्ण लागेको उनीहरूको हाउभाउबाट बुझिन्थ्यो ।एक हूल पुुरुष मोडल कम्मरमाथि चाहिँ कोट मात्रै लगाएर र्‍याम्पमा देखा परे । दर्शकलाई यो दृश्य कौतूहलपूर्ण लागेको उनीहरूको हाउभाउबाट बुझिन्थ्यो । बाँकी
कार्तिक १, काठमाडौं – तपाईको खल्तीमा कति रुपैयाँ छ ? त्यो आफैं जान्नुस् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चलन चल्तीमा ल्याएका नोट सबै नेपालीलाई बराबरी बाँड्ने हो भने एकजना नेपाली नागरिकको भागमा साढे १५ हजार रुपैयाँ परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार ३० असोज २०७३ मा ४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका नोट चलन चल्तीमा छन् ।कार्तिक १, काठमाडौं – तपाईको खल्तीमा कति रुपैयाँ छ ? त्यो आफैं जान्नुस् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चलन चल्तीमा ल्याएका नोट सबै नेपालीलाई बराबरी बाँड्ने हो भने एकजना नेप...बाँकी
Prakash Margh, Dhumbarahi-04, Kathmandu
Copyright © RojgaarBazar